ဘိုးတော်လေလား၊ လူလိမ်လား | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Society & Lifestyle » ဘိုးတော်လေလား၊ လူလိမ်လား	29
Posted by panpan on Oct 27, 2011 in Society & Lifestyle | 29 comments
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျွန်မအဒေါ်ကြုံခဲ့တဲ့အကြောင်းလေး ဖောက်သည်ချတာပါ
ဘာလဲဆိုတော့ တွေ့လိုက်တာက လူအုပ်အလယ်မှာ လူနှစ်ယောက်၊ ပခြုပ်တစ်လုံး
အဲဒီလူနှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်ကဆရာ၊ တစ်ယောက်ကတပည့်
ဆရာလုပ်သူက စတစ်ကော်လံနဲ့ ယောပုဆိုးနဲ့
တပည့်က ဆံရှည်ကို နောက်စုစီးထားတယ်
ဒီလိုနဲ့ ပရိသတ်ထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်တယ်
ပြီးတော့ ဒီအဆောင်လေးငုံရင် စီးပွားတက်မယ်၊
ဘာပြုညာပြု စဖောတယ်၊ ကိုယ့်ကိုမကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးဆိုရင် ကိုယ့်ရှေ့တောင်ခြေစုံလာရပ်မယ်
ဒါနဲ့ပဲ ဘယ်သူလိုချင်လဲလို့မေးတယ်၊ အတင်းမတိုက်တွန်းပါဘူးတဲ့ ဒါလည်းပြောတယ်
ပရိသတ်ထဲက လိုချင်သူတွေက တောင်းကြတယ်
အဲဒီမှာ တပည့်လုပ်သူက “ဆရာ၊ လက်ဖွဲ့က သိပ်မကျန်တော့ဘူး”
ဆရာလုပ်သူကလည်း “မင်းကလည်း ကိစ္စမရှိဘူး၊ အသာနေစမ်းပါ”တဲ့
ပရိသတ်ကလည်း မရလိုက်မှာစိုးလို့ အလုအယက်
ဆရာလုပ်သူက စည်းဝိုင်းတစ်ခု ၀ိုင်းလိုက်တယ်
ဘာလုပ်မှာလဲလို့ ပရိသတ်ကတော့ စိတ်ဝင်စားလို့
“ကဲ ကဲ၊ အားလုံးအဆောင်လက်ဖွဲ့တွေရပြီးပြီဆိုတော့ ယူထားတဲ့လူတွေ ဒီစည်းထဲကို ၀င်ထိုင်ပေးပါ”
အဲဒီမှာ ၂ယောက်က မ၀င်သေးဘူး၊
ဒါနဲ့ ဟို၂ယောက်လည်း ၀င်တာပေ့ါ
“ကဲ အားလုံးပဲ ၄နဲ့ ၅နဲ့ပေါင်းတော့ ဘယ်လောက်လဲ”
“ဟုတ်ကဲ့၊ ၉ဆိုတော့ ၉န၀င်းပေ့ါနော၊ ဒီတော့ လက်ဖွဲ့ဖိုးကျနော့်ကို ၉၀၀စီပေးကြပါ”
၁၀၀၀တန်တွေ၊ ၁၀၀၀တန်တွေ ပေးလိုက်ကြတာ၊ တပည့်လုပ်သူက လာကောက်တာပေ့ါ
ပြီးတော့ ပြောသေးတယ် “ကျနော် ဒီပိုက်ဆံတွေကို ဘယ်သူ့ကိုလှူရမှာပါ၊
တကယ်လို့ ကျနော်စားခဲ့ရင် ဘာဖြစ်ပါစေ ညာဖြစ်ပါစေ” ကျိန်ပါသေးတယ်
ဒီလိုနဲ့ နောက်ထပ်ပရိတ်ကြိုးလိုလို ကြိုးလေးတွေ ရောင်းပြန်ရော
“ဒီကြိုးလေးတွေအတွက်ကတော့ ကျနော့်ကို လက်ဖက်ရည်ဖိုးလေးပဲ မ,စပါခင်ဗျ၊
ပေးကြတာပါပဲ ၂၀၀တန်၊ ၅၀၀တန်တွေ၊ လူတွေလည်း ဒါမျိုးကျတော်တော်ငွေပေါနေလားပဲ
မပြန်သေးတာ ကျွန်မအဒေါ်၊ သူကပွဲပြီးထိစောင့်ကြည့်တာ
အဲဒီပရိသတ်ထဲမှာပါတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်မှာ မိန်းမဖြစ်သူက စောစောက လက်ဖွဲ့ယူပြီး
စည်းဝိုင်းထဲဝင်တော့ ၉၀၀ပေးရတယ်၊ နောက်က ယောက်ျားလုပ်သူကလည်း အဆင်သင့်
နောက်တစ်ခါ ကြိုးဖိုးတောင်းပြန်တော့လည်း နောက်ကယောက်ျားက ထုတ်ပေးရှာတယ်
ဒါနဲ့ ကျွန်မအဒေါ်လည်း မနေနိုင်မထိုင်နိုင် အဲဒီယောက်ျားကိုသွားပြောတယ်
“ရှင်တို့ တရားလေးဘာလေး မနာကြဘူးလား၊ ဒါဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် စဉ်းစားပါဦး၊
လူလူချင်း ဘယ်လူကဘယ်လောက်စွမ်းလို့ ဘာလုပ်ပေးလို့ရမှာတုန်း”တဲ့
နောက်တော့ ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်မှာ တပည့်လုပ်သူက “ဆရာရေ၊ အချိန်မရတော့ဘူး၊
မြန်မြန်လုပ်ပါတော့၊ သွားကြရအောင်” ဘာညာသာရကာ လုပ်တယ်
သူတို့ပခြုပ်ထဲက မြွေလည်း ပြတော့ပြသွားပါတယ်
မြွေအရွယ်ကို ကျွန်မအဒေါ် လက်နဲ့နမူနာပြတယ်၊ လက်မနှစ်ဖက်ထိ၊ လက်ညှိုးနှစ်ဖက်ထိပြီး
၀ိုင်းပြတယ်၊ အစတုန်းက ပါးစပ်ထဲ လက်ဖွဲ့ငုံခိုင်းတဲ့ကောင်လေးကိုလည်း ဘာမှမလုပ်ဘူး
သူလည်း အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ပွဲပြီးသွားတယ်
တပည့်လုပ်သူက ခုနကတောင်းလို့ရတဲ့ ပိုက်ပိုက်တွေကို ပါလာတဲ့ အိတ်အနက်ကြီးထဲ စုပြုံထည့်ပြီး
ကျွန်မအဒေါ်လည်း မချင့်မရဲနဲ့ ပြန်လာခဲသည်ပေ့ါ
သူ့စိတ်ထဲတော့ ပြောနေတာ “အဲဒါလိမ်နေတာ၊ လိမ်နေတာ”လို့
ပါးစပ်ကလည်း အော်မပြောရဲဘူး၊ သူကကြောက်တတ်ပါဘိသနဲ့၊ ဟိုဆရာတပည့်က အညှိုးနဲ့ရန်ရှာမှာ စိုးလို့တဲ့
ရွာသူားများကတော့ လည်ပြီးနပ်ပြီးသားဆိုတော့ ဒါမျိုးအလိမ်ခံရမယ်တော့ မထင်ပါဘူး
နို့ပေသည့် ဗဟုသုတလေးလည်းရအောင် နီးစပ်ရာလေးလည်း လက်တို့ရအောင်
chit has written 57 post in this blog.
View all posts by panpan →	Blog
etone says: ပန်ပန်ရေ… လှိုင်သာယာမှာ အဲ့ဒီလို ဘာမှန်း ညာမှန်းမသိတဲ့ လူတွေရှိတယ် … ကိုယ်တောင် ယောင်လည်လည်နဲ့ စပ်စပ်စုစု ရှေ့တိုးပြီး မယုံမကြည် သံသယစိတ်နဲ့ .. ပါးစပ်ဟောင်းလောင်း ဟပြီး …. သွားကြည့်သေးတယ် …အတူပါတဲ့လူက ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ မကြည့်နဲ့ မတော်လို့ ဟိုကမြွေ ပါးစပ်ထဲဝင်လာမယ်ဆိုပြီး ဂုတ်ဆွဲ ခေါ်ထုတ်တော့မှ … မကျေမနပ်နဲ့ ပြန်ခဲ့ရတယ် … ။ နေ့တိုင်း နီးပါး (မိုးမရွာတဲ့ရက်) ဆိုလျှင် … လူတွေ အုံခဲနေအောင် မြွေလင်ပ္ပါယ်လိုလိုဘာလိုလိုပြတယ် .. ပြီးတော့ .. ဦးထုတ်ချွတ်ပြီး ပိုက်ဆံ အလှူခံတယ် :P ပန်ပန်ပြောတဲ့ ဘာအစီရင်လည်း မသိတဲ့ဟာကြီး ပါးစပ်ထဲ ထည့်ထားဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး .. ဘာပိုး ညာပိုးတွေ ကပ်နေလို့ ၀မ်းလျှောနေဦးမယ် …. ရွံစရာကြီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1955
pan pan says: အစကတော့ ကောင်လေးပါးစပ်ထဲ အဆောင်ဆိုတာကြီး ငုံခိုင်းပြီး ဘာလုပ်မလဲလို့ စိတ်ဝင်စားကြမှာပေ့ါ
ပခြုပ်ထဲက မြွေနဲ့များ စမ်းသပ်မလားလို့ ပရိသတ်ကတော့ ထင်ကြမှာပေ့ါ
မtoneပြောသလိုပဲ၊ သူတို့အဆောင်ကြီးက ဘာကြီးမှန်းမသိ
mihninlay says: ကျွန်တော်လဲရန်ကုန်သွားတုန်းကတွေ့ ခဲ့တာဒီလိုလူပုံစံတွေပဲ…
ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုမြွေထည့်ထားတဲ့ သွပ်ပုံးလိုလေးကိုလှပ်ပြတယ်မြွေဖြစ်လားဖြစ်လားနဲ့ မေးတယ်..
ပြီးတော့ကွမ်းယာကိုနို့ ဆီခွက်ထဲကိုထည့်လိုက်တာဖားဖြစ်သွားရော.. ဖားကတော့ထွက်မလာဘူးပုံစံလေးပဲပြတာ…ပြီးတော့အဆောင်ရောင်းတယ် ပြီးရင်ဟိုစနေသားကမယုံဘူးသူ့ ခြေရာသွားယူခဲ့ဘာညာနဲ့ ရွှီးကြသေးတယ်… အဆောင်လဲဝယ်လိုက်ကြတာ အတူသွားတဲ့သူငယ်ချင်းကယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ဝင်ဝယ်သေးတယ်…
နောက်ဆုံးတော့ထွက်လာပြီးအဲအဆောင်ကိုလွင့်ပစ်ခိုင်းလိုက်ရတယ်… ဘာလုပ်ထားမှန်းမသိဘာမှန်းမသိဘုရားစင်ပေါ်တင်ထားခိုင်းတယ်လေ…. ကြိုးကနေတော့မြွေဖြစ်မဖြစ်မသိလိုက်ရဘူးလေပေါနေတာကများနေတာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 126
xman says: အဲဒီလူလိမ်မျိုးတွေက တောရော မြို့ပါ အနှံ့မှာလိုက်လိမ်နေကျပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂၀ ကလဲ ဒီအဆင်ပဲ။ အခုလဲ ဒီအဆင်ပဲ။
အရင်က မြောက်ဥက္ကလာမှာကို တော်တော်တွေ့သေးတယ်။
pan pan says: ဒါမျိုးတွေက ဟိုးအရင်ကလည်း ရှိပါတယ်
မျက်လှည့်ပြသလိုလို၊ အစီအရင်ပစ္စည်းရောင်းသလိုလိုနဲ့ ညာရောင်းတာ
ခုဟာတောင် ကျွန်မအဒေါ်က တမင်ကိုအစအဆုံးကြည့်နေတာ
နွယ်ပင် says: ပန်ပန်ရေ ဒါဘိုးတော်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး လူလိမ်ပဲ ဖြစ်မှာကျိန်းသေတယ်
လူတွေ ရိုးရိုးသားသား အမှန်တကယ် အလှူခံရင်သာ မယုံကြတာ
ဒီလို လူလိမ်တွေဆို ဘာမှတောင် မလုပ်ပြရသေးဘူး သူတို့က ကြိုပြီးယုံနေကြပြီးသားလေ …
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 492
စုံ စုံ says: တွေ့ဖူးတယ် တခါတလေဈေးသွားမိရင်လူအုံခဲနေတာမျိုးကြုံဖူးတာပေါ့
ဆူး says: ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ဘက်ကို သွားရင် အမြဲ မြင်နေကျ မြွေ ပိစိညှောက်တောက် အရောင်လေးတွေနဲ့.. ပြီးတော့ ထိုင်ပြီး ဘာရောင်းနေလဲ မသိဘူး။
မှော်ဆရာ says: အဲဒါ အိမ်တွင်း အလှမွေး မြွေလေးတွေလေ အမရဲ့
နွားနို့ပဲ သောက်တယ် ။ အဆိပ်မရှိဘူးလို့ ပြောတယ် ။
ကိုင်ကြည့်ချင်ရင်တောင် ကိုင်ကြည့်လို့ ရပါတယ် ။။
ကျွန်တော်လဲ ၀ယ်တော့မ၀ယ်ဖြစ်ပေမယ့် သေသေချာချာတော့ ကိုင်ကြည့်ခဲ့တယ် ။
အမှတ်တမဲ့ ကြည့်ရင် အရုပ်လေးတွေလိုပဲ …
pan pan says: အမလေး
အဆိပ်မရှိပေမယ့် အကောင်သေးလေးတွေဆိုတော့ ဟိုထဲဒီထဲ ၀င်ကုန်ရင်အခက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9979
windtalker says: အလို…
ဘယ်တွေထဲ ဝင်ကုန်ရင် ခက်ကုန်မှာပါလိမ့်
ကြောင်အိမ် တို့ ဗီရိုထဲ တို့ ထင်ပါရဲ့ 
မြွေပွေးတော့ မမွေးလိုက်ပါနဲ့ ညီမငယ်ရေ
Was this answer helpful?LikeDislike 410
အီးတီ says: အဲဒီမြွေပိစိညှောက်တောက် ၁ ကောင် ငယ်ငယ်က မွေးဘူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက တကောင် ၂၀၀၀ ပါ … ကိုင်ကတာတော့ အသဲယားစရာပါ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သူကလေထဲမှာတာင့်တောင့်ကြီး ခေါင်းကလဲဟိုရမ်းဒီရမ်းနဲ့ ။ အိမ်
မှာ ငါးမွေးတဲ့မှန်ကန်ကြီးနဲ့မွေးတာပါ။ ၂ ရက်ပဲ မွေးကပါသေးတယ် အိမ်ကမကြိုက်လို့ပြန်လွှတ်
ပေးလိုက် ပါတယ်။ မြွေပွေးတော့ မမွေးပါဘူး။ ကြောက်လို့ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1789
နွယ်ပင် says: အဲဒီမြွေကို မြွေသူတော်လို့ခေါ်တယ်
နွယ်ပင်တို့လဲ အိမ်မှာမွေးဘူးတယ် အရောင်က အစိမ်းဘက်
နည်းနည်းလေး သမ်းတယ် သူကအမှတ်တမဲ့ ကြည့်ရင် မြွေရုပ်နဲ့တော်တော်တူတယ် တော်တော်လေးလဲ လှတယ် သူက နို့နဲ့ ရေပဲသောက်တယ်လေ ။
အိမ်မှာ မွေးတုန်းက သေသေချာချာလေးမွေးတာပါ အချိန်မှန်နို့တိုက်
ရေတိုက်နဲ့ပေါ့ ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့မှန်းမသိဘူး (3) လလောက်နေတော့
Was this answer helpful?LikeDislike 7073
etone says: BAK ရှေ့မှာ ရောင်းတာမို့လား မြွေရောင်စုံလေးတွေ … သူတို့ပြောတော့ မြွေသူတော်လေးတွေတဲ့ … ။မြွေနဲ့မတူပဲ သနားစရာတောင်ကောင်းတယ် … သူ့ခမျာ ပိစိညှောင့်တောင့် …တီကောင် ဆိုဒ်ကြီးလေးလောက်ပဲရှိပြီး ရှည်ပဲ ရှည်တာ… ။ ရှောပင်းစင်တာတွေရောက်လျှင် အိတ်ဖွင့်ဖွင့်စစ်တာကို အမြင်ကတ်လို့ … အဲ့မြွေတကောင်လောက်ဝယ်ပြီး အိတ်ထဲထည့်ဦးမလား တွေးသေးတယ် … ။ မြွေလေးတွေကို သနားလို့ … မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ လက်လျှော့လိုက်ရတယ် … ။ စတိုးဆိုင်က စက်ကျူရတီတွေ အရမ်းစစ်လွန်းလို့ သောင်ညင်တောင် ကတ်တယ် … တကယ့် ဗုံးပါတဲ့ လူကျလျှင် မိကို မမိပဲနဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1955
pan pan says: အင်း…………အဲလိုဆိုတော့လည်း မြွေလေးတော့ မွေးချင်သား
မွေးထားပြီး ဂရုမစိုက်နိုင်ရင် သင်းလေးဒုက္ခများမှာစိုးရသေး
ဟိုတပတ်လောက်ကပဲ အိမ်မှာ ဘဲပေါက်လေးနှစ်ကောင် ဆတ်ဆော့ပြီးမွေးတာ
စက္ကူပုံးထဲထည့်ရမှာလည်းသနားလို့ ဒီတိုင်းလွှတ်ထားတာ ဟိုချေးပါ၊ ဒီချေးပါနဲ့
ဒဏ်မခံနိုင်တော့ဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5619
inz@ghi says: ဘာမြွေ မွေးမှာလဲ ပန်ပန် …
လူရှိန်အောင် ကော်ဘရာ လောက်မွေး သိလား …..
Was this answer helpful?LikeDislike 1955
pan pan says: ကိုဇာ
တော်ကြာ မြွေကိုက်ခံရပြီး လွတ်လပ်စွာ သွားလာပိုင်ခွင့်အပိတ်ခံရလို့ ရွာထဲတောင်ဝင်မရဖြစ်သွားမှာစိုးရသေး :P
Was this answer helpful?LikeDislike 5619
inz@ghi says: တိဝူးလေ မွေးချင်ဒယ် ဆိုလို့
နီးစပ်ရာမှာတင်ရှိတာ မေ့နေမှာ စိုးလို့
ပြပေးတာ …အဟီး ..
pan pan says: ကိုဇာပဲမွေးထားလိုက်ပါတော့
Was this answer helpful?LikeDislike 476
AKKO says: ကော်ပရာကတော့ ရွာထဲကနေပျောက်နေတယ် မြွေဖမ်းမယ့်လူတွေရှိလို့ပါတဲ့ :P
အရင်က ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ ယုန်မွေးဖူးတယ် ။ နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ ဈေးထဲသွား သတ်မယ့်ငါးလွှတ်မလို့သွားဝယ်ရင်း ယုန်ရောင်းနေလို့ အိမ်ကို ကိုယ်မှမ၀ယ်လာလျှင် ချက်စားမယ့်ပုံနဲ့ပြောပြီး ၀ယ်လာလိုက်တယ် ။ နှစ်လ သုံးလလောက်ကျတော့ တစ်ကောင်သေတယ် မြေကြွက်ကိုက်လို့ ၊တကောင်တည်းအထီးကျန်မှာစိုးလို့ ကျန်တဲ့ကောင်ကိုပါ တိရိစ္ဆာန်ရုံပို့ပြီး လှူလိုက်ရတော့တယ် ။
ဘာကောင်မွေးမွေး သံယောဇဉ်ဖြစ်တယ် မမွေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
Was this answer helpful?LikeDislike 8445
လှူတာလို့ဖြစ်သွားအောင် လုပ်လို့လွယ်လွယ်လေး..။ အဆရာတောင်ချီရနိုင်သေးတယ်..။
အဟမ်း..။ ဒီလောက်ပဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1266
Shwe Ei says: ကျမဘိုကလေးမှာအလုပ်ဝင်နေတုန်းကလည်း မြွေပြပြီး ဘာရောင်းညာရောင်းတွေ နေ့တိုင်းလိုလိုတွေ့တယ်။ ရောက်လာပြီဆို လင်ကွင်း ၂ချပ်တဗြန်းဗြန်းတီးပီး ဆူညံလိုက်တာမှလွန်ရော။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကလည်းမနည်းဘူးဗျာ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 763
“ဘီလူးကြီး”ogre says: ပန်ပန်ရေ
သူတိုဟာ(၃)ယောက်ကနေ (ရ)ယောက်ထိ ပါလာတတ်ပါတယ်
မျက်စိ အ၀တ်စီးပြီး လိမ်တဲ့အဖွဲ့တွေဆို(၇)ယောက်လောက်ပါပါတယ်
ခါးပိုက်နှိုက်လဲ အဖွဲ့ရှိပါတယ် အနှိမ့်ဆုံး(၃)ယောက်ပါ တစ်ယောက်ကလူကြည့်ပေးပါတယ်
တစ်ယောက်ကလူကာပေးပါတယ် တစ်ယောက်ကနှိုက်ပါတယ် ပြီးရင်ပစ္စည်းကိုလက်လွှဲပါတယ်
အဓိက ကတော့ လမ်းဘေးကဟာဆို ဘာမှမယုံတာကောင်းပါတယ်..။။။
pan pan says: ဟုတ်ပ
တချို့များကားပေါ်မှာ ခါးပိုက်နှိုက်ခံရတာသိသိနဲ့ ဘာမှမပြောနိုင်ဘဲ ခံလိုက်ရတာ
အများနဲ့တစ်ယောက်ဆိုတော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 171
siamonone says: ဟုတ်တယ် . .ခါးပိုက်အနှိုက် မခံရအောင် ပိုက်ဆံအိတ် မသုံးရင် အကောင်းဆုံးဘဲ .. ဟီး ..
ကြောင်ကြီး says: ပန်လေးရေ ဦးကြောင်ကြီးက လူအစစ်ပါကွယ်၊ လိမ်နေတာ ဟုတ်ရပါဘူး..။ ဦးကြောင်ကို ဆောင်ထားရင် စွမ်းသကွဲ့၊ မယုံရင် ဆောင်ကြည့်၊ ဝါလည်းကျွတ်သွားပြီဆိုတော့။ ရွာသားများခင်ဗျာ လက်ဖွဲ့အစား ပွိုင့်ပေးခြင်းသီးခံပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1955
pan pan says: ဦးကြောင်ကလူအစစ်ဆိုတာ မယုံဘူး၊ ကြောင်အကြီးကြီး :D
အိမ်မှာကြောင်မွေးရင်ကိုဘီလူးရဲ့ရေမွှေးသည်အန်တီအနံ့ သင်းမှာတော့သေချာတယ် :P
unclegyi1974 says: ရိုးလွန်းလှတဲ့လိမ်နည်းလေးတခုပါဗျာ
snow white says:ုခုချိန်ထိကို အဲ့လူလိမ်တွေရှိနေတုန်းပါဘဲ ဘာလို့လည်းဆိုတော့တွေ့နေရတုန်းမို့ပါ ကြုံဖူးတယ် စနိုးဆို မီတာဆောင်ခိုင်းလိုက်တာ အဲ့လိုမျိုး လူလိမ်တွေလေမှာမြောသွားတာ လူတွေမှများကြီးဘဲ အုံနေအောင်ကြည့်နေလို့စနိုးလည်းဝင်ကြည့်မိလိုက်တာ အရုပ်ခေါင်းကို ကြိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ သမီးလေးဘာစားမလဲ မုန့်ဟင်းခါင်းစားမယ်ဆိုခေါင်းညိတ်လို့ပြောတယ် ကြည့်တော့ကြည့်နေတာ ဘဲ ဘာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ထားလည်းတော့ မသိဘူး ကြည့်နေ၇င်းနဲ့ခေါင်းညိတ်ပြပါတယ် ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးအလိမ်ခံထိဘူးတယ် …
Comments By Postစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - padonmar - padonmarခရီးသည်လေးသို့ - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - padonmar - padonmarဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - အရီးခင်လတ် - အရီးခင်လတ်ပုညကြိယာဆယ်ပါး - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစည်တော်ကြီး - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - မောင် ပေမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Ma Ma - အရီးခင်လတ်မွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - BMTM Mdy - မဟာရာဇာ အံစာတုံးဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - cobra - cobra“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - အရီးခင်လတ် - မောင် ပေအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - မောင် ပေ - pazflorစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - kai - ကြက်အူလှည့်၎ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - TNA - Ko chogyiSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - TNA - ကြက်အူလှည့်ဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - TNA - naywoon niအတု - naywoon ni - KyawTheinသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - naywoon ni - အလင်း ဆက်``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - ရာမည - Foreign Residentလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - KZ - မောင် ပေစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - KZ - ရာမညနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၅) - မင်းမင်း - KZအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - KZ - lele kyiရွာသူ/သားများ အတွက် - KZ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70581 Kyats )naywoonni (67475 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62237 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59297 Kyats )MaMa (58031 Kyats )Top Posts & Pagesစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး )